Wararkii u dambeeyay doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug - Jowhar Somali news Leader
Home News Wararkii u dambeeyay doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug
Wararkii u dambeeyay doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug
Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa la filayaa in goor dhow ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb, iyadoo ay socoto qaban qaabadii u dambeysay ee qabsoomida doorashada lagu dooranayo Guddoomiyaha iyo Labadiisa Kuxigeen ee Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa ku qulqulaya hoolka ay ka dhaceyso doorashada ee magaalada Dhuusamareeb, waxaana la filayaa in doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ay soo gabagabowda ka hor salaada jimcaha, haddii wareega koowaad lagu kala baxo.
Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa la sheegayaa inay ku tartami doonaan labo Musharax oo kaliya, iyadoo uu tanaasulay Musharaxii 3aad, taasoo ka dhigeysa in tartanka Guddoonka uu noqdo mid labo musharax oo kaliya u dhaxeeyo, laguna kala baxo wareegga koowaad, iyadoo aan la aadin wareeg labaad.
Musharaxiinta kala ah Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo C/naasir Aadan Cusmaan ayaa ku tartami doona xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, waxaana soo baxaya warar sheegaya inuu tanaasulay C/llaahi Axmed Calasow Shiine.
Tartanka Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa si gaar ah ugu dhaxeeya degmooyinka Ceelbuur iyo Ceeldheer oo ay ka soo jeedaan labada Musharax, waxaana la saadaalinayaa in doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ay halbeeg ama qiyaas u noqon karto cida ku guuleysata doorashada soo socota ee Madaxweynaha Galmudug.